ဂျပန်ပြက္ခဒိန်ကနေမြင်ရမယ့် ရက်ရာဇာနှင့် ပြဿဒါးနေ့ !!! - JAPO Japanese News
သော 22 Oct 2021, 12:41 ညနေ
ဂျပန်ဟာ Solar calendar ကိုအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်၊ နိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်တဲ့ ပုံမှန်ရက်စွဲတွက်ချက်မှုကို ထည့်သွင်းထားပေမဲ့၊ ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်လိုက်ရင် နည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့စကားလုံးတွေကို ရေထားတာအများကြီးရှိနေပါတယ်။
昭和の日 “ ရှောဝနော့ဟိ” ဆိုတာက အားလပ်ရက်တစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာက အဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ 大安（တိုင်းအန်း） ဆိုတဲ့စကားလုံးပါ။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ 赤口（Shakkou） ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။
ဒါက 六曜（Rokuyo） ဆိုတဲ့ ကံဇာတာဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်အတိုင်းပဲ၊ အမျိုးအစား ၆ မျိုးရှိပြီး၊ အဲ့ဒါကနေ့စဉ်အလှည့်ကျ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။
တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်ရှိတဲ့အတွက်၊ အပတ်တိုင်း ၁ ရက်စီပြောင်းလဲတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့မူလက တရုတ်ပြည်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အတွေးအခေါ်ဖြစ်ပေမဲ့၊ လက်ရှိဂျပန်မှာလည်း 六曜（Rokuyo） ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။
၎င်းတို့အသီးသီးက ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရသလဲဆိုတာကို မိတ်ဆက်ပေးရအောင်…
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် သေသေချာချာမှတ်သားပြီး၊ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်လည်းကံကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးသွားရင်အနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးအတိုင်း၊ အရာအားလုံးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်သင့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
နံနက်ပိုင်းဟာကံကောင်းပေမဲ့၊ နေ့လည် ၂ နာရီကနေ ၄ နာရီအတွင်းဟာ မကောင်းတဲ့အချိန်ဇုန်ဖြစ်တာကြောင့်၊ အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပတာတို့၊ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချကိုချမှတ်တာတို့ဆို နံနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခြင်းကပိုကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့အရာမှာ သူငယ်ချင်းကိုဆွဲခေါ်တယ်၊ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်၊ ဈာပနာအခမ်းအနားအတွက် မသင့်လျော်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဈာပနာအခမ်းအနားတက်ရောက်သူကိုပါ ၎င်းတို့လောကထဲ ဆွဲခေါ်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။
နောက်ထပ်အသံထွက်တူပြီး Kanji မတူတဲ့ “共引き” လို့လည်းရေးနိုင်ပေမဲ့၊ ပြိုင်ပွဲမရှိဘဲမဲခွဲတဲ့နေ့ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာနံနက်ပိုင်းက အရမ်းကံကောင်းပါတယ်။ နေ့လည်ကတော့ကံဆိုးပြီး၊ ညနေဟာ အတော်လေးကံကောင်းတာကြောင့်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကို ထမင်းစားဖိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုဖိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ရဲ့ညနေပိုင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားက မင်္ဂလာရှိတဲ့အတွက်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုမျှဝေတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး၊ 大安（တိုင်းအန်း） နေ့ပြီးတဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကျင်ပတဲ့ရက်တွေအဖြစ် ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
နံပါတ်တစ်မှာပြောသွားတဲ့ 先勝 ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာဖြစ်ပါတယ်။
နံနက်ပိုင်းမှာ Unlucky ဖြစ်ပြီး၊ ညနေပိုင်းဟာ lucky ဖြစ်တာကြောင့်၊ တစ်ခုခုယှဉ်ပြိုင်စရာရှိရင် ညနေမှာလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓပျံလွန်တော်မူသောနေ့ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ အဆိုးဆုံးခံစားချက်ကိုပြောခြင်းလို့ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာမှသက်ဆိုင်မှုမရှိပေမဲ့၊ စကားလုံးရဲ့မကောင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်က သိသာထင်ရှားတဲ့အတွက်၊ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနား စတဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းတွေကို ရှောင်ရှားကြပါတယ်။
ထူးကဲသော စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး၊ ကံကောင်းစေတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာအခမ်းအနားနေ့ရယ်လိုမသတ်မှတ်ထားဘဲ၊ ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်၊ မင်္ဂလာခန်းမတွေမှာ 大安တိုင်းအန်း နေ့ရောက်ပြီးဆို ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသူတွေအရမ်းများလို့ တော်ရုံတန်ရုံလွယ်လွယ်နဲ့မရတတ်ပါဘူး။
ဒါကို မဖတ်နိုင်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် အများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အနီရောင်ဖြစ်တဲ့ မီးနဲ့သွေးကိုပုံဆောင်တဲ့အတွက်၊ မီးလောင်ခြင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မီးဖိုချောင်သုံးဓါးကို သတိထားရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်ရော၊ ညနေရော Unlucky ဖြစ်ပြီး၊ မွန်းတည့်လောက်ကသာ ကံကောင်းစေတာကြောင့်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့မှာအရေးတကြီးသွားလာစရာရှိမယ်ဆိုရင်၊ တတ်နိုင်သလောက် မွန်းတည့်အချိန်ကို အကြံပြုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ 六曜（Rokuyo） နဲ့ တူ/မတူတော့မသိပေမဲ့၊ ဂျပန်မှာတော့ ဒီလိုမျိုးပြောကြပါတယ်။
ဒါကလည်း အရမ်းသတိပြုလွန်းရင် အလုပ်တောင်မလုပ်ရတော့ဘူးလား ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်မှာမို့လို့၊ စဉ်းစားချင့်ချိန်သင့်ပေမဲ့၊ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့် အစည်းအဝေးတွေဆိုရင်တော့ ဒီ 六曜（Rokuyo） နဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
အဲ့ဒိုခေတ်ကလူတွေအရမ်းခုံမင်ခဲ့ကြတဲ့ အယူသီးခြင်းဆိုတာ !!!
ပျော်ရွှင်မှုကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့ ကံကောင်းခြင်း 熊手Kumade (လာမည့်နှစ်အတွင်း အာကာသဆီကနေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို စုဆောင်းမှာလား?)